စစ်​​​​​တွေမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍စစ်​တွေမြို့ ၊မြို့မ​စျေး အတွင်းရှိစား​​သောက်ကုန်ဆိုင်များအား ရှောင်တခင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်း (၂၂-၁၂-၂၀၂၀)
ကချင်ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ်၊ပူတာအိုမြို့ရှိ ဆေးဆိုင်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (၂၀-၁၂-၂၀၂၀)
ထန်တလန်မြို့၊ မြို့မစျေးရှိ ကုန်စုံဆိုင်များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးအသိပညာပေးခြင်း ( December 17 – 2020 )
ကယားပြည်နယ် ရှားတောမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ရှားတောမြို့ဈေးတန်းရှိကုန်စုံဆိုင် (၁၅)ဆိုင်အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (၈.၁၂. ၂၀၂၀)
Mobile Lab Van ဖြင့် ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းစစ်ဆေးခြင်း (၃.၁၂.၂၀၂၀)
ရွှေ့လျားဓာတ်ခွဲယာဉ်(Mobile Lab Van)ဖြင့်ရှောင်တခင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (၂-၁၂-၂၀၂၀)
THE FOURTH MEETING OF THE JOINT SECTORAL COMMITTEE ON MRA FOR INSPECTION AND CERTIFICATION SYSTEMS ON FOOD HYGIENE FOR PREPARED FOODSTUFF PRODUCTS (JSC MRA ON PF)
သုံးစွဲရန်မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူ သိရှိရန် အသိပေးကြေငြာချက်
သက်တမ်းရှိ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများစာရင်း Update (၃၁-၁-၂၀၂၁)
(၂၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန မှတာဝန်ရှိသူများသည် စစ်​​​​​တွေမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍စစ်​တွေမြို့ ၊မြို့မ​စျေး အတွင်းရှိစား​​သောက်ကုန်ဆိုင်များအား ရှောင်တခင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
The Food and Drug Administration (FDA) was established in 1995 as one of the divisions under the Department of Health. The FDA division was upgraded toaseparate department in April, 2013. The aim of the department is to ensure the safety and quality of Food, Drugs, Medical Devices and Cosmetics in the country. FDA Headquarter is located in Nay Pyi Taw, the capital city of Myanmar, with five major divisions:
Administrative division, Drug Control division, Food Control division, Cosmetic and Medical Device Control division and Laboratory division while preexisting Yangon and Mandalay branches acting are still as major branches, control activities have greatly expanded with the establishment of new FDA branches in other Regions and State. In addition, FDA has also established branches in important border trade zones such as Muse, Kalthaung, Myawaddy and Tamu.
• Drug E-Submission Testing Link
• Drug E-Submission User Guide